Afrika: Nanome voninahitra an’i Michael Jackson ireo bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Febroary 2020 5:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Swahili, македонски, English
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Jona 2009)
Mpanao fampisehoana Nizeriana naka tahaka an'i Michael Jackson nandritra ny fampisehoana tany Abuja. Sarin'ny N.R tao amin'ny Flickr.
Niteraka fihetseham-po maro avy any amin'ny vazan-tany rehetra manerana izao tontolo izao ny fahafatesan'ilay kintan'ny pop Amerikana Michael Jackson. Mizara ny fahatsiarovany an'i Jackson ireo mpankafy tao amin'ny tranonkalany ofisialy amin'ny fiteny efa ho am-polony, ary nanamarika ny lohatenim-pejim-baovao manerana izao tontolo izao ity vaovao ity.
Nanome voninahitra ny Mpanjakan'ny Pop tamin'ny alàlan'ny fandefasana sary sy rindran-tsary ny bilaogera taty Afrika. Nanolotra ny lisitr'ireo hiran'i Michael Jackson miisa 26 izay ankafiziny i Oluniyi David Ajao raha nanoratra avy any Nizeria, raha nanome voninahitra ny fahatsiarovana an'i Jackson kosa ilay bilaogera Ogandey Serakelz tamin'ny torolàlana momba ny fanaovana ny moonwalk na fomba fandihy izay noforonin'i Jackson.
Any Ghana, nanangona ireo fihetseham-po tamin'ny fahalasanan'i Jackson tao amin'ny Twitter sy Facebook i Kent Mensah avy ao amin'ny Africa News:
“Tia an'i Michael Jackson i Afrika … vao teraka ianao dia efa mianatra ny miaina ary i Michael Jackson no mozika fantatrao… hoy ilay mpitendry mozika malaza indrindra hatramin'izay,” Rasco Patterson tao amin'ny twitter @chickenwang4.
“Ataovy toerana tsara ho ahy sy ho anao ity tontolo ity ary izany no teny avy amin'ny angano marina toa an'i Michael Jackson. Hahatsiaro anao foana aho Waco Jaco,” hoy i Elton Afari, Accra, avy any Ghana tao amin'ny Facebook.
Raha nampatsiahy ny fihetseham-pon'ireo Afrikana mpankafy marobe i Sudanese Thinker dia nahatsiaro ilay kintan'ny pop tamim-pitiavana:
Michael Jackson no fahazazako tamin'ny fomba maro. Nameno izany tamin'ny hafaliana sy ny fahatsiarovana mahafinaritra maro ny mozikany. Nampitsangana ahy izany rehefa trotraka aho. Nahafaly ahy izany rehefa malahelo aho.
Ary tena malahelo azy sy ny talentany tokoa aho amin'ny maha hafahafa sy mivilambilana azy.
Manome voninahitra an'i Jackson amin'ny tononkalo ilay bilaogera Ogandey Dickson Wasake :
Tamin'ny fahafatesan'i Michael Jackson;
Mameno ny tany ny ranomaso,
Mainty na fotsy;
Mitomany ny tovovavy Liberiana,
Ary toy izany koa i Diana malotokely,
eny fa na dia ireo olon-tsy fantatra ao Moskoa aza
Mihiaka isika rehetra;
“Tena ratsy izany; mampalahelo loatra izany;
Aloha loatra ny nahalasanan'ilay mpanjaka
ary tsy vitako ny tsy hitia azy ! ”
Na dia maro aza ireo bilaogera nalahelo ny fahafatesan'i Jackson, ny hafa kosa manontany ny safidiny hafahafa, anisan'izany ny fanovany ny lokon'ny volon-kodiny. Tany Ghana, nitoloko ilay bilaogera Emmanuel Bensa:
… .Milaza amintsika ny kolontsaina Afrikana fa tsy mety ny hitenenantsika zava-dratsy momba ny maty ary tsy hanao izany aho fa ny ho ataoko dia ny milaza tsotra izao fa fanapahan-kevitra tena ratsy ny safidiny ho lasa fotsy hoditra.
Tsara tarehy ny mainty hoditra ary ho toy izany foana izy. Manana endrika, feo, talenta i Michael Jackson amin'ny maha-Lehilahy Mainty Hoditra azy; Eh indrisy fa mampalahelo ?
Ho an'ilay bilaogera Ogandey Rosebell, niteraka fisaintsainana momba ny antony nahatonga ny vaovao hitodika bebe kokoa tany amin'ny fahafatesan'ilay kintan'ny pop fa tsy toy ny an'ireo voina hafa ity fahafatesan'i Jackson ity:
Nanontany tena aho raha tena mitovy avokoa ny olombelona rehetra rehefa nijery ny fihetsik'izao tontolo izao tamin'ny fahafatesan'i Jackson. Tsy hoe tsy fantatro akory ny fandraisana anjara nataon'i MJ tamin'ny mozika sy ny talentany lehibe, vendrana aho raha manao izany, saingy manontany tena aho hoe maninona isika no tsy tohina rehefa mahita ny fahafatesana manerana izao tontolo izao. Toa milaza avokoa ny olona rehetra fa hoe maty tanora izy tamin'ny faha-50 taonany, ary tonga saina tokoa aho avy eo fa 50 taona ny taham-pahavelomana any Oganda. Fantatrao ve fa efa tantara taloha aty amin'ny firenena Afrikana maro ny maty efa zokiolona? Fantatrao ve fa Irakiana maro isan'andro no miatrika dona tahaka ity tsapantsika tamin'ny fahafatesan'ny MJ ity ? Miantraika amin'ny vahoaka any amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Kongo ny tahotry ny ho faty sy ny hoavy tsy fantatra ho an'ireo zanany.
Nandà ireo tsikera ireo i Omar Basawad avy ao amin'ny Safari Notes ary nifantoka tamin'ireo talenta manatantara an'i Jackson:
Na inona na inona azo lazaina momba an'i Michael Jackson, na inona na inona mety hoeritreretin'ny olona momba azy dia zavatra iray no azo lazaina: namaritra vanim-potoana iray izy.
“RIP MJ”, hoy ny nosoratan'ilay bilaogera Kenyana, WildeYearnings. “Manana ny lanitra iray manontolo ianao izao handihizana ny moonwalk (ny dia eny amin'ny volana) …”